Sida Looga Faa'ideysto Badankood Warbixinta Beddelka AdWords | Martech Zone
Caawinta Google Ads
Keebaad doorbideysaa: Xayeysiinta dareenka badan ee soo jiidashada leh ee soo jiidata booqashada degellada 1,000? Mise midka tartiib-tartiib ah ee helay kaliya 12 guji illaa iyo hadda?
Waa su’aal khiyaali ah. Jawaabtu waa midkoodna.
Uguyaraan, maahan ilaa aad ka ogaatid inta booqdayaashaas badalay.
Xayeysiis aad loo bartilmaameedsaday oo ka dhashay daraasiin ficil beddelaad aqoon leh ayaa toban jeer ka qiima badan kan soo jiita boqolaal soo booqdeyaal ah oo aan u qalmin oo aan badalin. Adduunyada oo guji kasta oo lacag ahi ku kaco lacag, beddelaadyadu waa furaha. Si kastaba ha noqotee, waa maxay ujeedka bixinta xayeysiinta haddii aysan keenin taraafikada u qalma oo laga yaabo inay soo saarto dakhli soo laabasho ah?
Taasi waa sababta ka dambeysa isbeddelka ugu dambeeyay ee Google ee ku aaddan tifaftiraha warbixinta AdWords jiid-iyo-dhibic. Cusub tiirarka raadraaca beddelka sii suuqleyda xakameyn dheeraad ah sida xogta loo soo bandhigo si aad u aragto waxa run ahaantii shaqeynaya.
Maxaa iska beddelaya Warbixinta Beddelka AdWords?
cusub A Wadahadal khaanadda ayaa beddeleysa Ku-beddelashada is-hagaajinta. Qormadan cusub waxay soo bandhigeysaa xogta dhammaan ficilada beddelidda iyada oo la dejinayo habeynta lagu dejinayo "on."
Dhanka kale, an Dhammaan beddelaadaha khaanadda ayaa beddeleysa Qiyaasta wadar beddelka. Tiirkani wuxuu muujinayaa xogta oo dhan beddelaad — haddii aad u jeesatay fiicnaanta on or off.
Maxay adiga macnaheedu tahay isbeddelada Ka warbixinta AdWords ee Beddelka
Haddii aad ku aragto isbeddel weyn AdWords-kaaga beddelasho, ha argagixin. Waxaad ubaahantahay inaad ubaahantahay inaad sameyso xoogaa isbadal ah si warbixinadaadu ay ula jaanqaadaan qeexitaanka isbedelka Google ee isbeddelka. Tani waxay ugu dambeyntii fududeyn doontaa in xoogga la saaro beddelaadyada makro ee ka dhigaya ganacsigaaga lacag.
Isbeddelada ka soo warbixinta beddelka ayaa si otomaatig ah u dhici doona, laakiin waxaa jira dhowr tallaabo oo ay tahay inaad qaado si aad u hubiso in xogtaada loo gaarsiiyo hab siman oo aan xuduud lahayn:
Ku hagaaji dejimahaaga makaro iyo beddelaadyada yaryar
Haddii aadan horey u helin, go'aamiya sida saxda ah ee loo xisaabiyo a Dhaqale beddelashada ganacsigaaga Kuwani caadi ahaan waxay saameyn toos ah ku leeyihiin dakhliga shirkaddaada waxayna ku lug leeyihiin iibsi dhab ah ama ujeedo ah inaad iibsato. Diiwaangelinta lacag-bixinta ah, saxiixyada tijaabada bilaashka ah iyo codsiyada demo dhammaantood waxay ku xisaabtami karaan u beddelashada makro.
Si loo hubiyo in is-beddelka dakhli-abuurka ay ku soo baxaan sida saxda ah Wadahadal khaanadda, mid kasta ka hubi si aad u hubiso in loo dejiyay in la doorto: Xulo beddelidda aad rabto inaad wax ka beddesho, ka dibna dhagsii Wax ka beddelka dejimaha> Kordhinta oo hubi inay u degsan tahay on.
Sidoo kale, waa inaad u jeedisaa hagaajinta dejinta mid kasta micro beddelaadyada — sida isu-qoridda warsidaha email-ka ama kaa daba-socodka baraha bulshada. Beddelaadyadan wali waa la soo sheegi doonaa, oo ay weheliyaan dhammaan beddelaadyada makro, ee Dhammaan beddelaadaha column.
Hadaad keydisay filtarrada tixraacaas ama isticmaal beddelaad si aad u sameyso xisaabinta, hubi si aad u hubiso in kuwani weli si sax ah u shaqeeyaan. Tusaale ahaan: Haddii aad u dejisay xoogaa beddelaad yar off, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad beddesho miirayaasha si aad u isticmaasho khaanadda "Beddelidda" cusub markaa ma jiro wax hakad ah oo ku jira warbixinta.
Cusboonaysii xeerarka iswada.
Haddii aad isticmaasho xeerarka iswada or tiirarka caadada ah si loola socdo isbeddelada, dib loo eego loona cusbooneysiiyo dejintaada si loo hubiyo inay u sii shaqeeyaan sidii la filayay. Mar labaad, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho midka cusub Wadahadal Tiirka si loo hubiyo in sharciyadan ay sii wadaan inay kuu sheegaan marka xayeysiintu saameyn ku yeelaneyso gunta ganacsigaaga. Hadaad isticmaasho qoraallo si aad otomaatig ugu noqoto howlaha caadiga ah, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso nambarka oo aad hubiso wax kasta oo loo gudbiyo a diinta waa la cusbooneysiiyaa si loo muujiyo isbedelka.
Soo koobid: Isbadalada ugu dambeeyay ee Google ee ku saabsan warbixinta AdWords waxay sahlaysaa la socoshada xogta ugu muhiimsan ganacsigaaga. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad qaaddaa dhowr tallaabo oo deg deg ah si aad u hubiso tiirarkaaga, miirayaashaada iyo sharciyadaada in loo qaabeeyey si sax ah uga tarjumaya isbeddelada.
Tags: xeerarka iswada adwordsbeddelka adwordsmiirayaasha adwordsgoogle adwords
Nov 5, 2015 at 6: 45 AM
Waad ku mahadsantahay cusbooneysiinta Amanda. Wax badan ayaa runtii ka heli doona tan waxtar leh. Hab kale oo lagula socon karo isbeddelada Google Adwords iyo barnaamijyada kale ee gorfaynta websaydhka ayaa ah in la helo qalab adtech ah oo iyaga dhex geli kara iyo http://www.TapAnalytics.com taas waa sameyn kartaa.